Nihaona tamin'ny filohan'ny Azerbaijan ny sekretera jeneralin'ny UNWTO
Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Nihaona tamin'ny filohan'ny Azerbaijan ny sekretera jeneralin'ny UNWTO
Ny sekretera jeneralin'ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fizahantany (UNWTO), Zurab Pololikashvili dia nihaona tamin'i Andriamatoa Ilham Aliyev, filohan'ny Repoblikan'i Azerbaijan mba hiresaka momba ny fampandrosoana ny sehatry ny fizahantany ao amin'ny firenena sy ny fomba hanamafisana kokoa ny fiaraha-miasa eo amin'i Azerbaijan sy ny UNWTO.
Ireto olana manaraka ireto dia noresahina nandritra ny fivoriana: ny tsingerintaona faha-10 an'ny Baku Process, ny fitomboana mahatalanjona an'ireo tonga iraisam-pirenena tany Azerbaijan izay nahatratra + 20% tamin'ny 2017; ny fanohanan'ny UNWTO ho an'i Azerbaijan amin'ny fampiharana ny tetikasa fampiasam-bola, ny fanamorana ny visa, ny politikan'ny lanitra misokatra, ny fanamafisana ny fiaraha-miasa ao amin'ny UNWTO Executive Council ary ny fanampiana UNWTO ho an'ny firenena amin'ny sehatry ny fanavaozana sy ny fanabeazana.
“Tamin'ny taona 2017, hitan'ny Azerbaijan nitombo 20% ny fahatongavan'ireo mpizahatany iraisam-pirenena. Ity fitomboana lehibe ity dia vokatry ny politika manohana ny olana toy ny visa sy ny fampiasam-bola, ny fanoloran-tenan'ny governemanta ary ny fitarihana. Miarahaba an'i Azerbaijan aho noho io fahombiazana io, izay mihoatra lavitra noho ny fitomboan'ny antonony manerantany ho an'ny 2017 misy 7% eran'izao tontolo izao ary manantena ny fanamafisana ny fiaraha-miasa efa mafy orinay ”hoy ny sekretera jeneraly.
Nandritra ny fitsidihany ofisialy, nihaona tamin'i Andriamatoa Abulfas Garayev, Minisitry ny Kolontsaina sy ny fizahantany ao amin'ny Repoblikan'i Azerbaijan, ny sekretera jeneraly mba hiady hevitra momba ny fiaraha-miasa amin'ny UNWTO.
Amin'ny andro ho avy, Andriamatoa Pololikashvili dia hanokatra ny foara fitetezam-paritry ny fizahantany sy fizahan-tany Azerbaijan faha-17 ary hiteny amin'ny Oniversite fizahantany sy fitantanana Azerbaijan (ATMU).
Qatar Airways hahazoana 25% ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Vnukovo any Russia